Dawladda Puntland oo dadweynaha u ogaalatay in ay dollar ku bixiyaan qayb ahaan casnhuuraha ku waajibay. – Radio Daljir
Dawladda Puntland oo dadweynaha u ogaalatay in ay dollar ku bixiyaan qayb ahaan casnhuuraha ku waajibay.
Luulyo 29, 2012 3:33 g 0
Garowe, July 29 ? Dawladda Puntland ayaa si rasmi ah daboolka uga qaaday in ay wax ka baddal mugleh ku samaysay hannaankii canshuuraha badeecooyinka ka yimaada dibadda dalka, kana soo degayey dekedaha iyo garoomada Puntland.
War-qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska wasiirka maaliyadda ee Puntland Faarax Cali Shire, ayaa lagu shaaciyey in dawladda Puntland ay dib-u-eegis labo dhinaca ah ku samaysay qaabka canshuureedka hantida ganacsi iyo midda kale ee waddanka dibadda laga soo galinayo sida ku cad qoraalka wasiirka maaliyadda.
Dawladda ayaa hoos u dhigtay qiimaha sarifka dollar ee ay horay wax ugu qiimaysan jirtay marka ay qaadanayso lacagta shilin Soomaaliga ah, taasoo dhammayd (30,000 Kun Sh.S ah), waxaana ay haatan ka dhigtay (28,000 Kun Sh. S ah), taasoo wali wax badan ka sarraysa qiimaha haatan uu marayo safirka dollarku suuqyada Puntland.
Sidoo kale dawladdu, waxay ganacsatada Puntland u ogalaatay 40% canshuuraha ku waajibay badeecadahooda in ay ku bixiyaan dollar ahaan, iyadoo la tix-raacayo Taraafada dawladdu wax ku canshuurto oo dollar ku qotonta, waxaana sidoo kale 60% kale ay ku bixin doonaan ganacsatadu Somali ahaan sida lagu xusay qoraalka dawladda.
Wasiir kuxigeenka wasaaradda maaliyadda Puntland Cabdi Ibraahim Warsame oo maanta arrintaasi uga warramay Radio Daljir, ayaa sheegay tallaabadaasi in ay u qaadeen sidii dadweynaha reer Puntland ay ula wadaagi lahaayeen dhibaatada ka dhalatay hoos u dhaca sarifka dollar, ayna ka diir-naceen sida uu ganacsatada raad ugu yeeshay hoos u dhacaasi dollar.
Horay dawladdu, waxay canshuuraheedu ku salaysnaayeen lacagta dollarka Maraykanka marka laga hadlayo qiimaynta khidmadaha ku waajibay shayga la canshuurayo, hase ahaatee ?marka lacagtaasi la gaynayo khasnadda dawladda waxaa khasab ahayd ganacsatu in ay u baddalaan shilin Somali, mana jirin wax dollar ah oo kastamyada dawladdu ay qaban jireen.
Barnaamijka Tartan iyo Tacliin ee ka baxa Daljir oo xalay galay habeenkii lixaad
Ergooyinkii shirka Muqdisho oo maanta guddiyo laga xulay iyo dastuurka oo lagu wado Arbacada in la meelmariyo.